မှိုဘေကွန်ဝက်သား Tenderloin ကျပ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
မှိုဘေကွန်ဝက်သား Tenderloin ကျပ်
အမဲသားကိုမမှီပါနှင့် ဝက်သားတင်ဒါသည်အလွန်ပိန်ပိန်နေပြီးအလွန်အကျွံသောက်လျှင်ခြောက်သွေ့နိုင်သည်။ ငါကအမြဲသုံးတယ် အသားသာမိုမီတာ ... ငါ့အကြိုက်ဆုံးကသင်ချက်ပြုတ်နေစဉ်၎င်းကိုစောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်းသင် ၀ င်နိုင်သည်။ ငါ့မှာတစ်ခုရှိတယ် ဒီတစ်ခုလိုပဲ ထိုသို့တောက်ပပါ!
ဝက်ကိုမဖြတ်ခင် ၁၀ မိနစ်ခန့်ငြိမ်သက်စွာနေစေပါ။ ဒါကနူးညံ့ပြီးအရည်ရွှမ်းစေမည်! (အသားကင်အားလုံးနဲ့လုပ်သင့်တယ်။ )
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၂၅ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၄၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၄ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly N. ဒါကကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မအတွက်မကြာခဏလုပ်တဲ့ညစာပါ။ ကျနော်တို့ကအကြီးအစာအဘို့အသုပ်နှင့်အချို့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အတူတက်အစေခံရန်ကိုချစ်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၆ ချပ် ဘေကွန် ကုန်တယ်
▢၈ အောင်စ မှိုများ ကုန်တယ်
▢၁ လေးညှင်း ကြက်သွန်ဖြူ ထုကုန်တယ်
▢၁ ဇွန်း မင်္ဂလာပါ
▢၁ ဇွန်း လတ်ဆတ်သော parsley
▢၁ ဝက်သား tenderloin
▢½ ဇွန်း Dijon မုန်ညင်း
▢မြည်းစမ်းဖို့ဆား & ငရုတ်ကောင်းအနက်ရောင်
400 ° F မှမီးဖို Preheat ။
ကြည်လင်တဲ့အထိ ၈ မိနစ်ဘေကွန်ချက်ပြုတ်ပါ မှိုများ၊ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းငရုတ်ကောင်းနှင့်ကြက်သွန်ဖြူများကိုထည့်ပါ။ ပျော့ပျောင်းသည်အထိချက်ပြုတ်။ အပူမှဖယ်ရှားရန်နှင့် breadcrumbs နှင့် parsley အတွက်နှိုးဆော်။ အေးမြပါစေ။
ဝက်သားကိုစာအုပ်တစ်အုပ်လိုဖွင့်နိုင်အောင်ဝက်ကိုဖြတ်ပြီး (အကုန်လုံးဖြတ်ပြီး) ဖြတ်မယ်။ အမဲသားကို thick 'about လောက်ထူသည့်အထိမထည့်ပါနှင့်။
ဝက်သားကိုဘေကွန် / မှိုအရောအနှောဖြင့်ဖုံးထားပါ။ ရှည်လျားသောဘက်မှစတင်ခြင်းဖြင့်တင်ဒါတစ်ခုချင်းစီကိုလှိမ့ ်၍ သွားတိုက်တံဖြင့်လုံခြုံစွာထားပါ။
သံလွင်ဆီနှင့် dijon မုန်ညင်းပေါင်းစပ်ပါ။ ဝက်သားအပြင်ဘက်ကိုပွတ်ပေးပါ။ ဆားနဲ့ငရုတ်ကောင်းဖြန်းပါ။ မီးဖို၌ ၂၅ မှ ၃၀ မိနစ်သို့မဟုတ်ဝက်သားသည် ၁၆၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိမဖုတ်ပါ။ ဒယ်အိုးထဲကနေဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဖြတ်ခြင်းမပြုမီ 10 မိနစ်ကြွင်းသောအရာကြကုန်အံ့။
သော့ချက်စာလုံးမှိုဘေကွန်ဝက်သား Tenderloin ကျပ် သင်တန်းညစာ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။